चिनियाँ विश्व व्यवस्थाको प्रश्न- विचार - कान्तिपुर समाचार
चिनियाँ विश्व व्यवस्थाको प्रश्न
पुस ५, २०७६ रमेश के.सी.
अमेरिकी जनतालाई चुनावमा भोट कसरी हाल्ने थाहा छ । चिनियाँ जनतालाई चुनावमा भोट हाल्न आउँदैन । अमेरिकी जनता आफ्नो संविधानको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको बखान गरेर थाक्दैनन् । चिनियाँ जनतालाई व्यक्तिभन्दा परिवार ठूलो, परिवारभन्दा समाज र समाजभन्दा राष्ट्र ठूलो भन्ने कन्फुसियाली मन्त्र थाहा छ ।
दुई भिन्न राजनीतिक र सांस्कृतिक पद्धति भएका यी दुई मुलुकहरू अहिले प्रतिस्पर्धी भएका छन् । अमेरिकी संस्थापन पक्षका चिन्तक तथा रणनीतिकारहरू चीनको उदय अमेरिकालाई विस्थापित गरेर विश्व व्यवस्था हात पार्न खेल भएको दाबी गर्छन् ।
राष्ट्रपति बाराक ओबामा र डोनाल्ड ट्रम्पले त्यही भनिरहेका छन् । चीन खतरा हो, चीन चुनौती हो । यही क्रममा बीबीसी टेलिभिजनले ‘राइभल्स’ नामक कार्यक्रम बनायो भने अलजजिराले दुई भागमा दुई घन्टाको ‘द विग पिक्चर’ डकुमेन्ट्री प्रसारण गर्‍यो । एक्काइसौं शताब्दीको विश्व राजनीतिको रङ्गमञ्च अमेरिका र चीनको शक्ति अभियानले भरिनेछ । जसरी कि बिसौं शताब्दीको राजनीतिक रङ्गमञ्च अमेरिका र सोभियत संघको शक्ति अभियानले भरिएको थियो । अमेरिकाको क्षय सुरु भइसकेको छ । तर चीनका सर्वोच्य नेता देङ सियाओ पिङका सहयोगी तथा दोभाषे भिक्टर गाओ चीनको उदय कुनै पनि राष्ट्रलाई विस्थापित गरेर बढ्ने नभई विश्व शान्ति र स्थायित्वका लागि भएको बताउँछन् ।
के चीन सन् ५० पछि विश्व व्यवस्थाको दाबेदार हो ? घटनाक्रमले त्यस्तै देखाउँछ । सन् २२१ मा पहिलोपल्ट एकीकरण भएको चीन बिसौं शताब्दीको मध्यमा कम्युनिष्ट हुँदै अहिले कन्फुसियाली महाशक्ति बनेको छ । चीनका सामन्त शासकहरूको मस्तिष्कमा चिनियाँ विश्व व्यवस्थाको अवधारण ‘चीन केन्द्रित विश्व’को नाममा जरो गाडेर बसेको छ । एसियामा रहेको भारतीय र जापानी विश्व व्यवस्थाको अवधारणाभन्दा चिनियाँ विश्व व्यवस्थाको अवधारणा बलियो छ । चीनको उदयले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ । चिङ वंशले पहिलोपल्ट साम्राज्यको स्थापना गरेपछि कानुनवादको धारणा लागू गर्‍यो । जुन अहिलेसम्म जीवितै छ ।
चिङ वंशले स्थायित्व र सामाजिक संगतिमा जोड दियो । जसलाई वर्तमान चीनका शासकहरूले पनि जोड दिइरहेका छन् । कानुनवादको आवधारणा राज्यमा बस्नेले शासकप्रति वफादार भई नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । जसलाई चीनका शासकले वर्तमानमा सिनजियाङ र तिब्बतका अल्पसंख्यक मुस्लिम र बौद्धहरूलाई पालना गर्न बल प्रयोग गरिरहेका छन् । हङकङका जनताको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन पनि बेजिइङका सम्राटहरूको सम्पूर्ण स्वर्गमुनि छ भन्ने धारणालाई चुनौती हो । अमेरिकाले हालै हङकङ र सिनजियाङका नागरिकको मानव अधिकारका लागि विधेयकहरू कंग्रेसबाट पारित गरेको छ । तर चीनका नेता देङले पश्चिमाहरूले मानव अधिकारको प्रश्न विकासशील देशहरूलाई कमजोर पार्न रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरेको बताएको थिए । अमेरिकाले मानव अधिकार आफ्नो आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्न प्रयोग गरेको आरोप चीनले लगाएको छ ।
चिनियाँ समाज पश्चिमाहरूको जस्तो मिसनरी होइन । उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यसम्म चीनको आधुनिक विदेश मन्त्रालय नै थिएन । शासकहरूले आन्तरिक मामलामा ध्यान केन्द्रित गरेका थिए । सन् १९११ मा सन्यात्सेनले गणतान्त्रिक चीन बनाएपछि वेष्टफेलियन संरचनामा चीनले आफ्नो विदेश नीति सञ्चालन गर्न थालेको हो । सन् १६४८ मा जर्मनको वेष्टफेलियामा ३० वर्षसम्म संघर्षरत युरोपका राज्यहरू सम्झौतामा पुगेपछि त्यहाँ शान्ति र स्थायित्व आएको थियो । वेष्टफेलियन विश्व व्यवस्थाले अरुको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने र शक्ति सन्तुलनमा जोड दिन्छ । वर्तमान विश्व त्यही विश्व व्यवस्थामार्फत चलेको छ । एउटा विश्व व्यवस्था अर्कोमा सदा ठूलो युद्ध वा उथल–पुथल हुने गर्छ ।
सन् १९४५ बाट अमेरिकाले बेलायतबाट शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट विश्व व्यवस्था आफ्नो हातमा लियो । उसले संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व व्यापार संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतजस्तो बहुपक्षीय संगठनहरूको निर्माण गर्‍यो । अहिलेका विश्वका शासक तिनीहरू नै हुन् । शीतयुद्ध कालमा सोभियत संघले पुँजीवादी विश्व व्यवस्थालाई चुनौती दिएको थियो । अहिले त्यो चुनौती चीनले बेल्ट र रोड अभियानमार्फत एसिया, युरोप, अफ्रिकासम्म सञ्जालहरू बनाएर चुनौती दिएको छ । चीनले एसिया इन्फ्रारट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकमार्फत विश्व बैंकको विकल्प सारेको छ । संघाई कोअपरेसनमार्फत सुरक्षाका लागि क्षेत्रीय मञ्च गठन गरेको छ र तर यतिले मात्र पुग्दैन । पश्चिमाहरू मान्छन् कि चीनको एकदलीय कन्फुसियाली समाज अरु विश्वका लागि अनुकरणीय छैन । राजनीतिशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामा भविष्यमा चीन केही मौलिक र केही पश्चिमा हुने बताउँछन् ।
उनी चिनियाँ मोडल पश्चिमा मोडलजस्तो वैश्विक नहुने दाबी गर्छन् । किनभने चीन वेष्टफेलियन मोडलमार्फत नै उदाएको हो । चीनको इतिहासमा उसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वेष्टफेलियन हैन । तर आधुनिक कालमा चीन वेष्टफेलियन पद्धतिमा गए पनि उसको धारणा मध्यअधिराज्य ग्रन्थि जो आफूलाई विश्वको केन्द्र ठान्छ, त्यो जीवित नै छ । ओलम्पिक खेलको आयोजना राष्ट्रपति हु जिनताओको पालोमा गरेर विश्वमा देङले भनेजस्तो क्षमता लुकाउने होइन, प्रदर्शन गर्नका लागि सी चिनफिङको कार्यकाल झन् आक्रामक बनेर देखापरेको छ । चीनका सैनिक जर्नेल र रणनीतिकारहरू उग्रराष्ट्रवादी मुद्रामा प्रस्तुत हुन्छन् । अझ एकथरी त चीनको कन्फुसियाली सभ्यता विश्व व्यवस्थाको लागि उचित नै भएको दाबी गर्छन् । जसलाई लेखक मार्टिन ज्याक्सले विश्वको चिनियाँकरण भनेका छन् । एकथरी पश्चिमाहरू चीनको नेतृत्वलाई असल–खराब सम्राटको रूपमा तुलना गर्छन् । नेतृत्वमा असल सम्राट रहुन्जेल त ठिक हुन्छ, तर खराब सभ्राट भए कुरा बिग्रन्छ । वर्तमान राष्ट्रपति सी चिङफिङले आफ्नो दुई पदावधिको कार्यकाल असीमित पारेपछि उनलाई सम्राटको रूपमा हेर्ने पनि छन् ।
चीन अहिले अमेरिकाको छेउछाउमा नरहेका राष्ट्रहरूसंँग सम्बन्ध बढाइरहेछ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा जापान, अष्ट्रेलिया, रूस र भारत पनि आ–आफ्ना भूमिकामा छन् । एसियाका सम्पूर्ण जनसंख्यामा १ अर्ब ४० करोडमात्रै चीनको हो । सन् ३० सम्म एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट अमेरिकालाई पछाडि धकेल्न चाहन्छ भने सन् ५० सम्म विश्व व्यवस्थाको दाबेदार बन्छ । अहिले चीनले अमेरिकासँग खोजेको भनेको मुख्य शक्तिराष्ट्रको सम्बन्ध मात्र हो । अहिले नयाँ शीतयुद्धको हल्ला सोभियत संघसँग चीनको तुलना गरेर अमेरिकीहरूले गरिरहेका छन् । तर चीन र अमेरिका बीचको द्वन्द्व मुख्य रूपमा व्यापार र प्रविधिमा केन्द्रित छ । चीनले बजार र अर्थतन्त्र र विज्ञान प्रविधि पश्चिमबाट लिएको हो ।
उदार विश्वको एजेन्डालाई नमान्ने चीनले पक्कै पनि अहिले विश्वमा उदार प्रजातन्त्रको क्षयबाट सन्तुष्टि लिएको हुनसक्छ । अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उदयपछि स्वकेन्द्रित र रैथाने अमेरिका बनेपछि चीनले भूमण्डलीकरणको वकालत गरेको छ । पश्चिमी सभ्यताको स्रोत ग्रीक दर्शन, युरोपको प्रबोधन क्रान्ति र पुनर्जागरणको काल हो । जसका वैश्विक मान्यता र संस्कृति छन् । तर चीन एसियामा केन्द्रित शास्त्रीय कन्फुसियाली चिन्तनको राष्ट्र हो । विश्वमा अरु इस्लाम, हिन्दु र अफ्रिकी सभ्यता पनि छन्, तसर्थ चीनको उदयको नाममा दुवै पक्षबाट अतिशयोक्ति विचारहरू प्रकट हुँदै आएका छन् । सन् १९७२ मा राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनका बेइजिङ भ्रमणका योजनाकार हेनरी किसिन्जरले भने अनुसार चीन र अमेरिका दुवै विश्व व्यवस्थाका दाबेदार देखापर्छन् ।
संसारभर अहिले उदारवादीहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । अमेरिका र बेलायतमा लोकप्रियतावादको उदयले युरोप, ल्याटिन अमेरिकाको ब्राजिल र दक्षिण एसियाको भारतमा प्रभाव पारेको छ । करिब ४० वर्ष अघिको नवउदारवादीको विजयले स्थापित गरेका राजनीतिक, आर्थिक पद्धति विरुद्ध जनमत तयार भएको छ । युरोपीय युनियन ब्रेक्जिटसँगै धरापमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा सभ्यतागत राष्ट्रको हवाला दिने चीनको मोलतोलबढिरहेको छ । उदार विश्वको सैनिक गठबन्धन नेटोको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानियोल म्याक्रोनले हालै नेटोलाई ब्रेन्डेड भने ।
नेटोको स्थापनाको ७० वर्षको सम्मेलन भर्खरै सकियो । उक्त सम्मेलनले चीन नयाँ खतरा र चुनौती रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । ट्रम्प विश्व मामलामा पछाडि फर्किरहेका छन्, सायद यसैकारणले होला, वर्तमानलाई इतिहासकारहरूले अनिश्चयको युग भनेका छन् । पश्चिमी मान्यता अनुरुपको भन्दा सभ्यतागत राष्ट्र भन्ने चीनको के वैश्विक अपिल छ ? वा त्यो चीन विशेषलाई मात्रै हो । यसले नै चिनियाँ विश्व व्यवस्थाको भविष्य तय गर्नेछ । प्रकाशित : पुस ५, २०७६ ०८:५३
लामो लिखित इतिहास बोकेको ताओ धर्म चीनको अमूल्य ग्रन्थमात्र होइन कि मानव जीवनलाई निर्देशन गर्ने गहकिलो पुस्तक हो । लाओत्सु कन्फुसियसका समकालीन थिए । २५ सय वर्ष अगाडिको त्यो युगलाई जर्मन चिन्तक कार्ल यास्पर्सले ‘एक्सियल एज’ भनेका छन्, किनभने त्यो कालखण्डमा ग्रीकमा अरस्तु, प्लेटो, सोक्रेटस, चीनमा कन्फुसियस, लाओत्सु र दक्षिण एसियामा बुद्ध र महावीरहरू जस्ता धर्म र ज्ञानका आविष्कारहरू जन्मिएका थिए । ताओ ते चिङका लेखक लाओत्सुलाई पश्चिमी जगतका कवि होमरजस्तै पौराणिक व्यक्तित्व मानिन्छ । जसका विषयमा अनेको किंवदन्ती रचिएका छन् । ५० करोड जनताले मान्ने यस धर्मग्रन्थमा कविताका रूपमा ५ हजार शब्दमात्र छन् । शासन र शासकका बारेमा पनि ज्ञान दिन यो दर्शन आज पनि उत्तिकै उपयोगी र शिक्षाप्रद छ ।
प्रकाशित : मंसिर २१, २०७६ ०८:४६